Buñuelos ရိုးရာအချိုပွဲ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | 11/01/2022 10:00 | အချိုပွဲ
မှန်တယ်။ ပုရွက်ဆိတ်ကနေ။ * ဘိုနို၊ ဂေါ့တ်၏ ဤအရာ။ * buggjo 'စိုင်'; cf ကြောင် အရိုး 'စိုင်'။
1.m. အသီးအနှံများကို ဂျုံမှုန့်ဖြင့် ရောထားသော ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို ဂျုံမှုန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆီထဲတွင် ကြော်ထားကာ ကြော်လိုက်လျှင် နူးအိသွားကာ ပုံသဏ္ဍာန် အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ထွက်လာသည်။
ဘယ်သူက ဒိုးနပ်မစားဖူးလဲ ငါတို့အားလုံး ဒီရိုးရာအချိုပွဲတွေကို တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာ စမ်းကြည့်ဖူးတယ်လို့ ငါပြောရဲပါတယ်။ buñuelos မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ကြိုက်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလို ကြော်တယ်။ ခရင်မ်မုန့် ချောကလက်၊ နတ်သမီးလေးဆံပင် သို့မဟုတ် အခြားအမွှေးများ။
Bezzia တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒိုးနက်မုန့်လုပ်ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့မှု ဆုံးရှုံးရန် ယနေ့ သင့်ကို တိုက်တွန်းပါသည်။ မုန့်စိမ်းပြုလုပ်ခြင်းမှာ အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ဂေါ်ပြားဖြင့် စက်ရုပ်နှင့်ပြုလုပ်ရန် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း လက်ဖြင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဘယ်အရာက ပိုကုန်ကျနိုင်မလဲ။ ဆီအပူချိန်မှာ အမှတ်ကိုရယူပါ။ အဲဒါတွေကို ကြော်ဖို့၊ ဒါပေမယ့် ရှာတွေ့ဖို့ လုံလောက်တဲ့ မုန့်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီနေ့ ငါတို့အဲဒီမှာရပ်တယ်။ ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် သင့်အား ရွေးချယ်စရာအချို့ကို ပေးဆောင်ရန် ကြာမြင့်မည်မဟုတ်ပေ။
ရိုးရာ အချိုကြော် ကြိုက်လား။ ထို့နောက် ကြိုးစားရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် မုန့်များ နှင့် ဝိုင်ချိုနှင့်အတူဒိုးနပ်.
၄၀ ဂရမ်။ ရေ
2 ကြက်ဥ M က
စတင်ရန် ဂျုံမှုန့်ကို တဆေးနှင့်ရောမွှေပါ။ လက်ခံသူတွင်။
ထို့နောက် ထောပတ်နှင့်အတူရေကိုအပူပွက်ပွက်ဆူလာသည်အထိ ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆား နှင့် သကြား၊
အဲဒါဆိုရင် ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဖယ်လိုက်ပါ။ ဂျုံမှုန့်အရောအနှောကိုထည့်ပါ။ နှင့် တဆေးကို ချက်ခြင်းထည့်ပါ။ သစ်သားဇွန်းဖြင့် စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် မွှေပေးပါ။
ပြီးရင် ဒယ်အိုးကို မီးထဲပြန်ထည့်ပါ။ ဘောလုံးရသည်အထိ မွှေပေးပါ။ နံရံများကို အလွယ်တကူ ခွာထုတ်နိုင်သော မုန့်စိမ်း။
ပြီးပါက ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဖယ်လိုက်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် နွေးပါစေ။
ထိုအခါ ကြက်ဥကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထည့်၊ တစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးနောက်ကောင်းစွာရောမွှေပါ။ ညီညီညာညာ၊ အထူနှင့် ခရင်မ်မုန့်စိမ်းကို ရရှိသည်အထိ ဂေါ်ပြားဖြင့် စက်ရုပ်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မုန့်စိမ်းကို 10 မိနစ်လောက်ထားပြီးမှ နှပ်ထားပါ။ ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆီများများ အပူပေးပါ။ သေးငယ်ပြီး နက်နဲသော အကြော်များ မျှောနိုင်စေရန်၊
ဆီပူလာလျှင် နှိုက်ယူစရာ များများစားစား မရှိစေဘဲ တက်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာ၊ မုန့်စိမ်း၏သေးငယ်တဲ့ဝေမျှ (၎င်းတို့သည် ထုထည်အားဖြင့် လေးဆတိုးမည်ကို သတိပြုပါ) ပြီးလျှင် ဆီထဲသို့ ချလိုက်ပါ။
ကြော်သည်။ ဖောင်းလာမယ်။ ပြီးသောအခါ တစ်ဖက်၌ ရွှေရောင်ပြောင်း၍ မိမိဘာသာ လှည့်ကြလိမ့်မည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး ရွှေရောင်ပြောင်းသွားကာ ဇွန်းဖြင့် ဖယ်ရှားကာ စုပ်ယူထားသော စက္ကူပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးတာနဲ့ အကြော်များကို အအေးခံထားပါ။ icing သကြားနှင့်ဖြန်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » အချိုပွဲ » Buñuelos၊ ရိုးရာအချိုပွဲ
Robinson List၊ လုပ်ငန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ သင့်လက်တွဲဖော်ကို ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ။